Caafimaadka- iyo caymiska qaxootiga ku sugan dalka Mareykanka | Refugee Center Online
Magangelyo-doonka – updated December 2018
Daryeelka Caafimaadka ee soo galootiga iyo qaxootiga ee dalka Mareykanka
Going to dhakhtarkaaga ama isbitaalka lacag badan ku kici kara oo dalka Mareykanka ah. Tani waa sababta ay muhiim ah in ay kaar caafimaad.
Medicare waa barnaamij caymiska ee caafimaadka dadweynaha ay maamusho dawladda Maraykanka. Medicare waxaa laga heli karaa dhammaan dadka waaweyn ee da'da 65 iyo wixii ka weyn iyo in muwaadiniinta naafada ah oo da 'walba. Medicare waxay bixisaa qorshe lagu caawiyo kharashka daawada. Baro badan oo ku saabsan Medicare.
Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP) bixisa daryeelka caafimaadka oo hooseeya- qoysaska dakhliga-dhexe leh carruurta yar yar. CHIP waa barnaamij wanaagsan maxaa yeelay waxa ay bixisaa ballamaha dhakhtarka carruurta iyo daryeelka caafimaadka. Waxaa muhiim ah in qoysaska qaxootiga in ay carruurtooda geeyaan dhakhtar ee sannad walba baaritaan iyo tallaalada. Raadi gobolka ee barnaamijka CHIP.
Haddii aad tahay dakhligoodu hooseeyo iyo ilmo, tani waa barnaamij wanaagsan. dheeraad ah ka baro iyo raadin gobolkaaga barnaamijka WIC.
Act Affordable Care (ACA), sidoo kale loo yaqaan “ObamaCare,” wuxuu u baahan yahay ugu muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka sharci u leedahay caymiska caafimaadka. Laakiin waxaa kale oo kuu ogolaanaya in aad iibsato caymiska caafimaadka kharashka hoose iyadoo la kaashanayo dowladda. Eeg haddii aad ka heli karto hoos imaad ka yar Xeerka Daryeelka awoodi karo ee www.healthcare.gov.